လင်္ကာနှစ်သစ်ကူး၊ သမိုင်းအပိုင်းအစနှင့် မြန်မာ့သင်္ကြန်အရွေ့
Posted by အရှင်ကုသလသာမိ on April 21, 2009
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ အလုသ၀ုရုဓု (Aluth Avurudhu)လို့ ခေါ်တဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလဟာ နှစ်စဉ် ဧပြီလ ၁၃-ရက်၊ ၁၄-ရက်မှာ ကျရောက်ပါတယ်။ ဆင်ဟာလ(သီရိလင်္ကာ)ဒဏ္ဍာရီအလိုအရ နေမင်း ကြီးဟာ မီးဧနရရှိယ(Meena Rashiya)ကနေ မေရှရရှိယ(Mesha Rashiya)ကို ရွှေ့ပြောင်းသွားတဲ့ အခါ သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန် နွေရာသီရဲ့ အဆုံးမှာ ကျရောက်တယ်လို့လဲ အမှတ်အသားပြုကြပါတယ်။ ဒီနှစ်သစ်ကူးကာလရောက်ရင် မိုးတွေလဲ သဲကြီးမဲ ကြီး စတင်ရွာပါတော့တယ်။ ပန်းတွေကလဲ သူ့ထက်ငါ ဦးအောင် အလုအယက်ပွင့်ကြပါတော့တယ်။ သရက်ပင်၊ ဒူးရင်းပင်၊ စွန်ပလွန်ပင် စတဲ့ အပင်များကလဲ အသီးတွေ စုပြုံသီးကြပါတော့တယ်။
သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးကာလဟာ နော်နဂသေ(Nonagathe)လို့ခေါ်တဲ့ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်း မှုတွေနဲ့ စတင်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ရပါဘူး။ တစ်ခုခုလုပ်တယ်ဆိုရင် ကျက်သရေမင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ ယူဆထားကြပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကို သွားကြပြီး ဘာသာရေး ဓလေ့ထုံးစံများနှင့်အညီ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်တွေရဲ့ တရားဓမ္မနဲ့ ကောင်းချီးပေးမှုကို ခံယူကြပါတယ်။ ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ တစ်နေရာမှာ စုဝေးကြပြီး ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးအစဉ်အလာများကို စတင်လုပ်ဆောင်ကြဖို့ ရဘန(rabana)လို့ခေါ်တဲ့ ဒရမ်များတီးပြီး ကြေငြာမောင်းခတ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
ပြည်သူတွေဟာ နှစ်ဟောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့မှာ အခမ်းအနားနဲ့ စုပေါင်းပြီး ရေချိုးကြခြင်း အားဖြင့် ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးကာလကို ဆင်နွှဲကြပါတယ်။ ရေမချိုးခင်မှာ နာနု(Nanu)လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးသစ် ရွက်၊ သစ်ခေါက်တွေနဲ့ ရောထားတဲ့ အမွှေးအကြိုင်တွေကို သုတ်လိမ်းကြပါတယ်။ ဒီအမွှေးအကြိုင် တွေက သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို စင်ကြယ်စေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဆီသုတ်လိမ်း ခြင်းအခမ်းအနားပြုလုပ်ပြီး နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို အဆုံးသတ်ကြပါတယ်။ မင်္ဂလာရှိသော ဆီသုတ် လိမ်းပွဲတော်မှာ လူကြီးသူမများက လူငယ်များကို သစ်ခေါက်၊ သစ်ရွက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အမွှေးအကြိုင်ဆီများဖြင့် သုတ်လိမ်းပေးကြပါတယ်။ ပြီးလျှင် အလုပ်သွားရမယ့် မင်္ဂလာအချိန်ကို သတ်မှတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ မိဘနှစ်ပါးနှင့် အသက်အရွယ်ကြီး ရင့်သူတို့အား ကွမ်းယာပေးကမ်းကြခြင်းပါပဲ။ ဒီကွမ်းယာဟာ မေတ္တာတရားနဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတလို့ ဆိုကြပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့ ဘိုးဘိုး၊ ဘွားဘွားများကလဲ ကွမ်းယာကို လက်ခံပြီး ဆုမွန်ကောင်းများ ပြန်လည်ပေးကြပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးမှာ ကွမ်းယာပေးကမ်းတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ ကွမ်း ယာမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်းကျိုးပြုတဲ့အရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီး၊ ဖာလာ၊ လေးညှင်း စတဲ့အရာတွေဟာ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အရာတွေချည်းပါပဲ။ သွားဖုံးတွေ သန်မာစေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးကုသနည်းကတော့ ကွမ်းဝါးခြင်းလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခံတွင်းကို သန့်ရှင်းစေပြီး ခံတွင်း အနံ့အသက်တွေကိုလဲ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကွမ်းရွက်ဆိုတာ ဆေးဖော်စပ်မှု အတော်များများမှာ မပါမဖြစ်တဲ့ အရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းရွက်ဟာ အစာကို ကြေညက်စေသလို ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေတဲ့ ကလာပ်စည်းတွေကိုလဲ ချေမှုန်းပစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန် တွေမှာလဲ ကွမ်းယာရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ရှင်းပြထားချက်တွေ ရှိပါတယ်။ သို့ရာတွင် ထုံးနှင့်ဆေးတို့၏ အကျိုးတရားကိုကား ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပေ။
အစားအသောက်ကတော့ သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးကာလရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းပါပဲ။ သီရိလင်္ကာအစားအစာဟာ အာဟာရဓာတ်တွေ အတော်ကြွယ်ဝတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကောက်ဦးနဲ့နို့ကို ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ကိရိဘတ်(Kiri Bhaat)ဆိုရင် အလွန်အာဟာရပြည့်ဝပြီး ရှေးဘိုးဘွားများ လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာအစားအသောက်တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးထူးခြားတာကတော့ ကိရိဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ နို့ထမင်းကို အိမ်ထောင်ဦးစီးကပဲ ချက်ပြုတ်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်မိသားစုလုံးဟာ အလွန်အရသာရှိတဲ့ နှစ်သစ်ကူးအစားအစာကို အတူတကွ ပျော်ပျော်ကြီး စားသောက်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ အိမ်တွေကို ဖြူဖွေးနေအောင် ထုံးသုတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အိမ်တွေမှာလဲ မီးရောင်စုံထွန်းပြီး အလှဆင်ကြပါတယ်။ ဒါကို နှစ်သစ်ကူးကာလမရောက်ခင် မပြုလုပ်ရပါဘူး။ နှစ် သစ်ကူးမတိုင်ခင် အိမ်အလှဆင်တာဟာ မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။ သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးရဲ့ အဓိကအပြင်အဆင်ကတော့ အိမ်ကို မီးအလှဆင်ခြင်းပါပဲ။ အိမ်သူအိမ်သားတွေဟာ အ၀တ်အစား သစ်တွေ ၀တ်ဆင်ပြီး အပြန်အလှန် လက်ဆောင်တွေ ပေးကြပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ ခရစ်ကတ် သို့မဟုတ် ဘေ့စ်ဘောလ်နဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ ဂုဒ္ဒုလို့ခေါ်တဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုကို ကလေးလူကြီး အားလုံး ကစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ နောက် ထင်ရှားတဲ့ ကစားနည်းကတော့ အုန်းသီးပစ်တမ်းကစားနည်းပါပဲ။ အချို့ကတော့ ဒက်ခ်ျလူမျိုးတွေ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ အပျော်ဖဲကစားကြပါတယ်။ သီရိလင်္ကာလူမျိုးတွေဟာ နှစ်သစ်ကူး ကာလမှာ မိမိတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးများ၊ သူငယ်ချင်းများရှိရာ ရွာများသို့ သွားရောက်ပြီး ကျက်သရေရှိသော လက်ဆောင်အမျိုးမျိုး ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ပြီးတာနဲ့ အချို့သူတွေဟာ လုပ်ငန်း အသစ်တွေကို စွန့်စားလုပ်ကိုင်ကြပြီး အချို့ကတော့ မိမိတို့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော သမီးပျိုတွေကို အိမ်ထောင်ရက်သားချပေးဖို့ ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။
သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ဘယ်နှစ်ဘယ်ကာလရယ်လို့ မဆိုနိုင်တဲ့ နှစ်ကာလပေါင်းများ စွာကတည်းက စတင်ကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သို့ရာတွင် ရှေးအခါက နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို မတ်လမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းနှစ်များကျမှ တမီးလ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် (Pudu Varsham) နှင့် အချိန်တူအောင် ဧပြီလသို့ နယက္ကာမင်း(Nayakkar King)အမိန့်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်ကြ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆင်ဟာလနဲ့တမီးလ်တို့ကို ပူးပေါင်းပေးခြင်း အားဖြင့် နိုင်ငံ့ဝိညာဏ် သို့မဟုတ် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကို နှိုးဆွပေးနိုင်တယ်လို့ ယူဆလိုက်ပုံရ ပါတယ်။
ရှေးယခင်က သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ဆင်ဟာလဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့ ဟိန္ဒူတမီးလ် လူမျိုးတွေကသာ ဆင်နွဲကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ အခုဆိုရင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များပါ ၀င်ရောက်ဆင်နွဲ လာကြလို့ အမျိုးသားပွဲတော်လို့ ဆိုရမလို ဖြစ်လာပါတယ်။ အီစတာပွဲတော်နဲ့ သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်တို့ဟာ ဒီကာလမှာပဲ ကျရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကတော့ သီရိလင်္ကာ နှစ်သစ်ကူးကာလဟာ အိန္ဒိယ၊ အီရန်၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဂျပန်၊ တရုတ်နဲ့ အခြားသော အာရှနိုင်ငံ များနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းကျင်းပလေ့ရှိကြတာပါပဲ။
နှစ်သစ်ကူးအစဉ်အလာလုပ်ဆောင်မှုတွေက ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ အီစတာပွဲတော် သို့မဟုတ် ပဆိုဗာပွဲတော်(Pass-over)နဲ့ ဆင်တူနေပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးတွေဟာ နှစ်ပေါင်းလေးရာကျော် အီဂျစ် တွေရဲ့ ကျွန်အဖြစ်နဲ့ နေခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး မိုးဆက်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ ကတိတော်နယ်မြေ (Promised Land)လို့ဆိုတဲ့ ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး လွတ်လပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျူးတွေဟာ ဒီကာလကို ပဆိုဗာ(pass-over)ပွဲတော်အဖြစ် ဆင်ယင်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ပွဲတော်ကျင်းပပုံတွေက သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးမှာ လုပ်ဆောင်တာတွေနဲ့ အတော်ကို တူလွန်းပါတယ်။ သူတို့လဲ နှစ်သစ်ကူးမှာ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘဲ ဥပုသ်စောင့်ကြပါတယ်။ အိမ်တွေကို မီးထွန်းတယ်၊ သိုးစတဲ့ သတ္တ၀ါမျိုးစုံကို သတ်ဖြတ်ပြီး ယဇ်ပူဇော်တယ်။ စားပွဲသောက်ပွဲကျင်းပတယ်။ လင်္ကာရဲ့နှစ်သစ်ကူးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေတဲ့အရာထဲက ထူးခြားမှုတစ်ခုကတော့ ပဆိုဗာပွဲတော်ရောက်ရင် အမျိုးသမီးတွေဟာ ခရစ်တော်ကို ဆီသုတ်လိမ်းပေးကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သားကောင်တွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး ယဇ်ပူဇော်ကြတာကိုတော့ သီရိလင်္ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်သစ်ကူးနဲ့ ထပ်တူပြုလို့ မရဘူးပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက ယဇ်ပူဇော်မှုက မရှိဘူး မဟုတ်လား။
တစ်ချို့ပညာရှင်တွေကတော့ တစ်ခြားနိုင်ငံ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ဆိုတာ ဂျူးတွေရဲ့ ပဆိုဗာပွဲတော် ကနေ ဆင်းသက်လာပြီး ဒေသဆိုင်ရာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ရောနှောသွားခဲ့ကြတယ်လို့ ကောက် ချက်ချကြတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ မှန်ကန်မှုရှိနိုင်သလဲဆိုတာကတော့ စာရေးသူလဲ လက်လှမ်းမမီပါဘူး။ တကယ်တော့ ဘယ်သမိုင်းဆရာမှလဲ ဒါကို သမိုင်းကြောင်း အထောက်အထား အပြည့်အစုံနဲ့ မတင်ပြနိုင်ကြသေးပါဘူး။ တခြားနိုင်ငံနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တွေဟာ ပဆိုဗာပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ကာလနောင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ ပေါ်ပေါက်လာကြတယ်ဆိုတာလောက်ပဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပဆိုဗာပွဲတော်နေ့မှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ ခရစ်တော်ကို အဆီတွေနဲ့ သုတ်လိမ်းပေးကြတာဟာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာ အသက်ကြီးရင့်သူတွေက လူငယ်တွေကို အမွှေးနံ့သာ ဆီသုတ်လိမ်းပေးတာနဲ့ တူနေပါတယ်။ ယုံကြည်မှုကလွဲပြီး ပွဲတော်ကျင်းပပုံတွေက သိပ်ကို တူလွန်း နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပဆိုဗာပွဲတော်နဲ့ သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဘယ်လိုဆက်နွယ်မှုရှိသလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သမိုင်းပညာရှင်ကမှ သေချာမပြောနိုင်ကြပါဘူး။
ရှေးခေတ် အီဂျစ်ပြည်မှာ သြဆိရိစ်(Osiris)လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝထာဝရဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ် ကြတယ်။ အဲဒီထာဝရဘုရားသခင်ဟာ သေခြင်းတရားနဲ့ ပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ နေနတ်မင်းကြီး(Sun God)ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဂျူးတွေအပါအ၀င် ဆီမစ်တစ် လူမျိုးတွေ(အာရပ်၊ ဖီနီးရှင်း၊ အဆီးရီးယန်း)ဟာ နေနတ်မင်းကြီးအဖြစ် သြဆိရိစ်(Osiris) နတ်ဘုရား ကို ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းကို ပေးတယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး ကိုးကွယ်ကြတယ်။ အဲဒီကနေ အာရှဘက်ကို ပြန်ကြည့်တော့ အာရှမှာလဲပဲ နေကို ကိုးကွယ်တဲ့ လူမျိုးစုတွေ အများကြီးရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဟိန္ဒူ နှစ်သစ်ကူးမှာလဲ နေနတ်မင်းကို ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ပူဇော်ပသကြတာတွေ ရှိပါတယ်။
အာရှလူမျိုး အတော်များများကလဲ နွေရာသီ ရောက်လာပြီဆိုရင် နတ်မင်းတစ်ပါးကနေ နောက်နတ်မင်းတစ်ပါးကို တာဝန်လွှဲတဲ့ကာလ(နှစ်ကူးကာလ)လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူး အားလုံးဟာ ရှိနေတဲ့၊ တွေ့ထားတဲ့ သမိုင်းအချက်အလက်တွေအရ ဒီသမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မှာ အနည်းနဲ့အများ အခြေခံနေတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာမှ တိုင်းပြည်ဒေသအမျိုးမျိုး၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအမျိုးမျိုးတို့နဲ့ ရောယှက်ပြီး အစပျောက်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရောရော အားလုံးလုပ်ဖြစ်နေဆဲအရာကတော့ ရေလောင်းခြင်း၊ မီးထွန်းခြင်းနဲ့ ဆီသုတ်လိမ်းကြခြင်းပါပဲ။
သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးကာလမှာ ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ အဖေ၊ အမေတွေက သားသမီးတွေ နဲ့လာလည်သူတွေကို အကြွေစေ့လေးတွေ ပေးကမ်းကြတာပါပဲ။ သားသမီးတွေရော၊ ဆွေမျိုးတွေပါ အဆိုပါအကြွေစေ့ကို အတော်လိုချင်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နှစ်သစ်မှာရတဲ့ပထမဆုံး ငွေဖြစ်လို့ပါလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒဏ္ဍာရီအဆိုတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဣန္ဒြဒေ၀(Indradeva)လို့ခေါ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနတ်သားဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပေးဖို့ လူ့ပြည်ကို ဆင်းသက်လာတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနတ်သားဟာ အဖြူရောင်အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ဆင်ပြီး ခေါင်းမှာလဲ ပန်းတွေနဲ့သရဖူခုနှစ်ခုကို ဆောင်းထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဝေါဟာရအနေအထားအရ “ဣန္ဒြ”ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ “ဣန္ဒ”ဆိုတဲ့ပါဠိစကားနဲ့အတူတူ ပါပဲ။ သိကြားမင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ မြန်မာမှာလဲ သင်္ကြန်ရောက်ရင် သိကြားမင်းဆင်းတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ သိကြားမင်းစီးတဲ့ အကောင်တွေကလဲ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် မတူပါဘူး။ ဆင်၊ မြင်း၊ နွား စသဖြင့် အတော်များပါတယ်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ နောက်ထပ် ယုံကြည်မှုတစ်ခုလဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ အ၀ုရုဒု ကုမာရယ (Avurudu Kumaraya)ဆိုတဲ့ နတ်အသစ်တစ်ပါး ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုပါပဲ။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ အချို့ဒေသတွေမှာ နှစ်သစ်မှာ ရောက်လာ မယ့်နတ်မင်းအတွက် ယဇ်ပလ္လင်များကို အုန်းလက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ ယဇ်ပလ္လင်လုပ်ပြီး ပူဇော်ခြင်းနဲ့ အုန်းလက်နဲ့ယဇ်ပလ္လင်လုပ်တာဟာ တူတယ် လို့ ဆိုပေမယ့် မတူတဲ့အရာတွေကတော့ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေက သိုး၊ ဆိတ်စတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး နတ်ဘုရားကို ယဇ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်ပြီး သီရိလင်္ကာသားတွေကတော့ ကောက်ပဲသီးနှံနဲ့ စတုဒိသာကျွေးမွေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှာတော့ ရေလောင်းဖို့ အုန်းလက်တွေနဲ့ မဏ္ဍပ်တွေ ဆောက်ကြပါတယ်။ အချို့ဒေသမှာတော့ အိမ်ရဲ့တောင်ဘက်အရပ်မှာ နတ်မင်းအသစ်အတွက် မီးအိမ်တစ်ခု ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ နှစ်သစ်ကူး ကာလဟာ ကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲကာလနဲ့ ထပ်တူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလမှာ ရာသီသစ်မှာ တာဝန် အသစ်နဲ့ရောက်လာမယ့် နတ်မင်းတွေကို ပူဇော်ပသကြပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ရဲ့ အစဖြစ်ရာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပေမယ့် ချစ်စရာယဉ်ကျေးမှုများနဲ့ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကျင်းပပုံတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာက စတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပွဲတော်ကာလ တွေမှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့အညီ ကုသိုလ်တရားများ ဆည်းပူးဖို့ရန်အတွက် ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘဲ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့ သွားရောက်ပြီး သီတင်းသီလဆောက်တည်ခြင်း၊ ကျွေးမွေးလှူဒါန်းခြင်း များပြုလုပ်ကြပါတယ်။ စေ့စေ့စပ်စပ်ပြောကြမယ်ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓတရားတော်များမှာ မင်္ဂလာရှိသော အခါသမယအတွက် နေရာ၊ နေ့ သက်မှတ်ထားခြင်းမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်မှာမဆို မင်္ဂလာရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ သီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အဓိကပွဲတော်တွေထဲမှာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် မပါဝင်ပါဘူး။ ၀ိဆက်ပွဲတော်၊ ပိုဆွန်ပွဲတော်နဲ့ ဧဆလပွဲတော်တို့ကသာ အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
သီရိလင်္ကာရှိ ခရယာန်အချို့က နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ခရစ်ယာန်အီစတာပွဲတော်နဲ့ ပူးပေါင်းလို ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို အကြီးအကျယ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ သူတွေလဲ မနည်းပါဘူး။ ပူးပေါင်းချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သူတို့ရဲ့ ခရစ်ယာန်ထုံးတမ်း စဉ်လာတွေကို ရောက်ရှိရာ အရပ်ဒေသလူမျိုးတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့အကြားမှာ ပူးဝင်ပြန့်နှံ့စေချင် ကြလို့ပါပဲ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ခရစ်ယာန်ယဉ်ကျေးမှုဟာ ရောက်ရှိရာအရပ်ဒေသတွေမှာ အနည်းနဲ့အများ ပူးဝင်ကပ်ပါနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းမှုကို ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့သူတွေကတော့ ဆန့်ကျင် ဘက်အမြင်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့် ခရစ်ယာန်ထုံး တမ်းစဉ်လာတွေ၊ စံတွေ၊ တန်ဖိုးတွေ လျော့ပါးသွားမှာကို စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ သူတို့စိုးရိမ်မယ်ဆိုလဲ အပြစ်မဆိုသာဘူး။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ ခရစ်ယာန်က 7%မျှသာ ရှိပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အီစတာပွဲတော်ကို သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ရဲ့အောက်မှာ သိမ်သိမ်ငယ်ငယ် ကျင်းပ နေရတာကို မမျှတဘူးလို့ ပြောနေကြတယ်။ ဒါ့အပြင် ခရစ်ယာန်တွေက သူတို့ရဲ့ အီစတာပွဲတော်ကို အမျိုးသားပွဲတော် (national festival)အဖြစ် သတ်မှတ်မပေးလို့ မကျေနပ်ချင်ကြပါဘူး။ ဒီလူဦးရေနဲ့ ဒီလို နှစ်ကာလပေါင်းများစွာ ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားတဲ့ဒေသမှာ ဒီလို တောင်းဆိုကြတာဟာ သင့်တော်၏၊ မတော်၏ စဉ်းစားကြဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်။ ကိုလိုနီစိတ်ဓာတ် မကုန်ကြသေးသူများ လို့ အားနာပါးနာ ပြောလိုက်ရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှာ ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ကို နိုင်ငံတော်ပွဲတော်(National Festival)အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ ဘာပြောကြမလဲ။
သီရိလင်္ကာမှာ နှစ်သစ်ကူးကာလရောက်ပြီဆိုရင် ခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီဥတုပြီးဆုံးပြီး မိုးတွေအလျှံပယ် ရွာပါ တော့မယ်။ သစ်ပင်တွေမှာ ရွက်သစ်တွေ ဖူးဝေလို့ နေရာတိုင်း စိမ်းလန်းနေတယ်။ ငှက်တွေကလဲ တေးဆိုလို့ ပန်းတွေလဲ အလုအယက်ပွင့်လာကြတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ သစ်သီးဝလံတွေလဲ စားလို့မကုန်အောင် ပေါများလို့ပေါ့။ ဒီအချိန်ဆို လူငယ်တွေလဲ ချစ်သူနဲ့အတူ ဘ၀တစ်သက်စာ လက်တွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်၊ လက်ထပ်လေ့ရှိကြတယ်။
သဘာဝအားဖြင့် နှစ်သစ်ကူးကာလဆိုတာ ညသန်းခေါင်မှာ ဖြစ်လေ့ရှိပေမယ့် မြန်မာနှစ်သစ်ကူးလိုပဲ သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးကတော့ ဝေဒပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံပေးတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ကူးတဲ့ရက်ကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဝေဒပညာရှင်တွေက နှစ်ဟောင်းရဲ့အဆုံးနဲ့ နှစ်သစ်ရဲ့အစကို သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာ့သင်္ကြန်ပွဲတော်နဲ့ သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးဟာ ပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့် တူတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ့သင်္ကြန်တွင်းမှာ ကလေး၊ လူကြီးမရွေး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့ သွားရောက်ပြီး ဥပုသ်သတင်း ဆောက်တည်ကြပါတယ်။ အချို့ဆိုလျှင် နှစ်သစ်ကူးကာလအတွင်း ဒုလ္လဘရဟန်းဝတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများက သီလရှင်ဝတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ မိဘတွေကလဲ သူတို့ရဲ့ ရင်နင့်သည်းချာ သားသမီး အလိမ္မာများကို ကိုရင်၊ ရဟန်းဝတ်ခိုင်းခြင်း၊ သီလရှင်ဝတ်ခိုင်းခြင်းများပြုလုပ်စေကြသည်မှာ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှ မတွေ့နိုင်တဲ့ အသည်းခိုက်စရာ ဓလေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်တွင်းမှာ (အထူးသဖြင့် တောအရပ်ဒေသတွေမှာ)လူကြီးသူမများကို ရေချိုးပေးခြင်း၊ ခေါင်းလျှော်ပေးခြင်း၊ အုန်းဆီများလိမ်းပေးခြင်း၊ မိမိတို့ တတ်နိုင်သမျှ ကြွေးမွေးထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်မှာ ၀မ်းသာစရာမြင်ကွင်းများအဖြစ် တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုကြည့်ရင် အထက်ပါ ဓလေ့လေး တွေဟာ လွမ်းစရာအတိတ်တွေ ဖြစ်လို့နေခဲ့ပြီလို့ ၀မ်းနည်းစွာ ဆိုရတော့မှာပါ။
လက်ရှိ မြန်မာမှာ ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေအရတော့ အလွန့်အလွန်ကို ကွာခြားသွားပါပြီ။ သီရိလင်္ကာနှစ်သစ်ကူးမှာ အကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အပြုအမူမျိုးကို မတွေ့ရသလောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့သင်္ကြန်ကတော့ (အများစုကို ကြည့်ပြီး ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင်) အကုသိုလ်တွေ မိုးမွှန်အောင်လုပ်တဲ့ ပွဲကြီးအဖြစ်သို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်လာနေတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်္ကြန်ဆိုရင် အရက်သေစာ သောက်စားပွဲကြီး၊ လူငယ်လူကြီး မျာပွေပွဲကြီးလို့ ဆိုရတော့မယ့်ကိန်း ဆိုက်နေပြီဖြစ်လို့ ချစ်စရာ ယဉ်ကျေးမှုတွေ မပျက်သုဉ်းခင် တစ်ခုခု လုပ်သင့်နေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ။
1. New Year -anational festival for Sri Lanka; By W. T. A. Leslie Fernando
2. Sinhala Avurudu: Festival overlaid by legend and myth and shrouded by superstition; By Punyakante Wijenaike
3. Sinhala Avurudu: RecallingaNew Year of yesteryear; By Sybil Wettasinghe
4. Avurudu Rituals: The Ayurveda system; By Dr. Upali Pilapitiya
Casino.com gri-go.com Archives - 출장샵 ScoopGo.com's collection of online 1xbet 먹튀 casino and sports betting tips, casino games, video slots, kadangpintar live dealer games https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ and more!